कोरोनासँग लड्न नेपालले के-के पायो सहयोग ? - Kohalpur Trends
२५ जेठ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुगेका बेला संक्रमितहरुले बेड र अक्सिजन समेत नपाएका दृश्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्यो ।
करीब साढे ६ हजार अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग
Previous Previous post: कुन–कुन अस्पतालले पाए भेन्टिलेटर ?
Next Next post: लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीको टिप्पणी : हावा भरिएको आकर्षक बेलुन